A Brief iwebata gearbox - Nantong ndanda Machinery Co., Ltd Error 400 (Bad Request)!!1
A Brief iwebata gearbox
Oge: 2017-10-11 Hits:
A igwe mejupụtara a ike isi iyi na a ike nnyefe usoro, nke na-enye achịkwa ngwa nke ike. Ọtụtụ mgbe nnyefe na-ezo nanị na gearbox nke na-eji Kwadobe na gia ụgbọ oloko inye ọsọ na torque tọghatara si a n'usoro n'usoro ike isi iyi na ngwaọrụ ọzọ
okwu nnyefe na-ezo aka dum mbanye ụgbọ okporo, tinyere ipigide, gearbox, prop aro (maka n'azụ-wheel mbanye), esi, na nke ikpeazụ drive akụ.
The kasị eji bụ na moto ugbo ala, ebe nnyefe adapts mmepụta nke esịtidem combustion engine ka mbanye wiil. Dị otú ahụ engines mkpa iji rụọ ọrụ na a dịtụ elu rotational ọsọ, nke bụ na-ekwesịghị ekwesị maka amalite, nkwụsị, na iji nwayọọ njem. Nnyefe ebelata elu engine ọsọ na iji nwayọọ wheel ọsọ, amụba torque na usoro. Transmissions na-eji na pedal ịnyịnya ígwè, ofu igwe, na n'ebe ọ bụla rotational ọsọ na torque ga na-emegharị
Transmissions na-eji na-akọ ugbo, ulo oru, mwube, Ngwuputa na akpakanamde akụrụngwa. Ke adianade nkịtị nnyefe onwem na Kwadobe, ndị dị otú ahụ akụrụngwa na-eme ka ọtụtụ ojiji nke hydrostatic mbanye na ọkụ mgbanwe-ọsọ draịva
Na Mbụ: Gịnị na-sparking nkwụnye?